सुरक्षा निकायको भूमिका कस्तो छ ?- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
सुरक्षा निकायको भूमिका कस्तो छ ?
काठमाडौँ — सिरहा–मुलुक प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्न थालेको छ । संघीय र प्रादेशिक संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले काम थालेको ८ महिना पुगिसक्यो । यही संरचनाअनुरूप स्थानीय तहमै विषयगत कार्यालयका कर्मचारी गाउँमै पुगेर काम थालिसकेका छन् ।
प्रदेश र जिल्लाको शान्ति सुरक्षा नै विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड मानिन्छ । मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछि शान्ति–सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि चुनौती र अवसर दुवै थपिएको छ । सिरहाको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ ? सुरक्षा निकायको भूमिकाले स्थानीय कतिको सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यसै विषयमा गरिएको व्यक्त गरिएको विचार ।
राजनीतिक दबाब हाबी
अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
नागरिक, प्रशासन, प्रहरी सबै तहतप्का विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्छ । अनुशासनको पालन, कर्तव्य र जिम्मेवारीबोध सबैमा भयो भने सुरक्षा व्यवस्था आफैं बलियो हुन्छ । तर, सिरहामा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । हरेक कुरामा राजनीतिक दबाबमा काम गराउने विगतको परिपाटी अहिलेसम्म पनि कायम छ । यो दबाबलाई जिम्मेवार निकायले विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्‍यो । अझ, प्रहरी र प्रशासनले राजनीतिक दबाबलाई पन्छाउन सक्नुपर्छ । सिरहामा सुरक्षा चुनौती धेरै छन् । एकातिर खुला सीमा छ, खुला सीमाकै आडमा आपराधिक मनोवृत्तिमा संलग्नले आफ्ना गतिविधि बढाउँछन् । यसका लागि हरेक गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी राख्न आवश्यक छ । खुला सीमाकै कारण लागूऔषधलाई नियन्त्रण गर्न समस्या भएको छ । यसले पनि थप सुरक्षा चुनौती बढाएको छ । महिला र बालबालिकाका मुद्दामा राजनीतिक दबाब बढदो छ । यो दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले अनुसन्धानको पाटोलाई फराकिलो बनाउन जरुरी छ । अनुसन्धानको पाटो वैज्ञानिक भएको छैन । प्रहरीको कार्यान्वयन पक्ष दह्रो हुनुपर्‍यो । तर, सुरक्षा सुदृढ गर्नका लागि हरेक नागरिकमा सजगता, जिम्मेवारबोध जरुरी छ ।
सीमामा कडाइ आवश्यक
अध्यक्ष, सिरहा उद्योग वाणिज्य संघ
नयाँ संरचनामा मुलुक गएपछि सुरक्षा व्यवस्थामा केही सुधार महसुस गरेका छौं । खुला सीमाका कारण सीमा क्षेत्रमा अझै पनि केही उल्झन छन् । सुरक्षा मजबुती गर्न बोर्डरमा चेकजाँचलाई कडाइ गर्न जरुरी छ । प्रशासनिक काम छिटोछरितो हुने गरे पनि विकासको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन । सुरक्षाको सवाल जनप्रतिनिधिको काँधमा पनि जिम्मेवारी भएकाले सबै तह जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । अपराध बढ्नुभन्दा अपराधी पक्राउ पर्नु र सजाय पाउनु ठूलो कुरा हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । सुरक्षा क्षेत्रलाई थप सुदृढ गर्न सुरक्षा निकायलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । हरेक बजार र बोर्डर चेकपोस्टमा सीसीक्यामेरा जडान गर्नु आवश्यक छ । यसले पनि अपराधीको मनोबल घटाउन सहयोग गर्छ ।
प्रविधिमैत्री सुरक्षा हुनुपर्छ
पहिलाको तुलनामा सुरक्षा चुनौती कम भएको छ । विगतमा जस्तो चन्दा आतंकलगायत आपराधिक घटनामा कमी आएको छ । शान्ति–सुरक्षा भएन भने व्यवसाय चलाउन सम्भव हुँदैन । व्यवसाय चलाउन पनि सुरक्षा अपरिहार्य छ । तसर्थ, सुरक्षा नै समृद्धिको पहिलो खुडकिलो हो । अझै पनि सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक छ । स्रोत साधन र जनशक्ति थप्न जरुरी छ । सुरक्षालाई सुदृढ गर्न पनि हरेक नागरिक सजग हुन जरुरी छ ।
पहिलाको तुलनामा सुरक्षा जोखिम जिल्लामा कम भएको छ । तर घरेलु महिला हिंसा, बलात्कारका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण राजनीतिक चलखेल र दबाबलाई प्रहरी–प्रशासनले थेग्न नसक्दाको परिणति हो । यस्ता संगीन घटनामा कमी ल्याउन प्रहरी–प्रशासनले भरपर्दो र विश्वास योग्य काम गर्नुपर्छ । प्रहरीमा पुग्ने हरेक घटनामा राजनीतिक दबाब पर्छ । सिरहामै महिला सेल क्रियाशील हुन सकेको छैन । प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा यसलाई क्रियाशील गर्न जरुरी छ । र, प्रहरी निकायदेखि राजनीतिक, सामाजिक तहमा परम्परागत कार्यशैली र सोचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दबाबले बढाउने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नसके सुरक्षा चुनौती स्वत: कम हुन्छ । यो रोक्न नसके सुरक्षा र न्यायको अनुभूति पाउन सकिँदैन ।
पुरानै ढर्राको निकाय
राजकुमार राउत कुर्मी
सुरक्षा संयन्त्र अझै पनि पुरानै ढर्रामै सञ्चालित छ । प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । तर पनि नयाँ सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी अगाडि बढन जरुरी छ । वैज्ञानिक सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्‍यो । यसमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दल जिम्मेवार बन्नुपर्‍यो । प्रहरी संगठनमा जनशक्ति थप्न जरुरी छ । मानव अधिकार, महिला, बालबालिका हिंसालाई शून्य सहनशीलता अपनाएर प्रहरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
सुरक्षा सुदृढ पारेका छौं
प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहा
शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी संगठन नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्न कटिबद्ध छ । र, प्रयासरत पनि छ । प्रहरी सेवालाईजनमुखी र प्रभावकारी बनाउन सीमितस्रोत साधन र जनशक्तिका बावजुद पनि हामी क्रियाशील छौं ।
हामीले आफ्नो स्रोत साधन, जनशक्ति र दक्षताले भ्याएसम्म अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, जनताप्रतिको निष्पक्षसेवाभाव र सेवाग्राहीप्रतिको सभ्यव्यवहारलाई मूलमन्त्र मानेर काम गर्दै आएका छौं । भावी दिनमा नयाँसंरचनाअनुसार जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सरोकारवाला निकायलगायत सबै तहतप्काको सहयोग आवश्यक छ । सबैको सहयोगले जिल्लामा
सुरक्षा सुदृढ र कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध छौं ।
कार्यशैली र आचरण फेर्नुपर्छ
सिरहाको सुरक्षा अवस्था सन्तोषजनक नै छ । तर प्रादेशिक संरचनामामुलुक गएपछि सुरक्षा निकायको संरचना केन्द्रीकृत प्रक्रियाले नै परिचालित छ । स्थानीयस्तरमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीको मनोबल अहिले पनि उच्च हुन सकेकोछैन । अहिले पनि पीडितको आवाजतुरुन्त सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
पीडितहरूको समस्या सुनुवाइ गर्नका लागि अगुवा, राजनैतिक दलले पहल गर्दा मात्र सम्भव भइरहेको छ । यसले न्याय प्रक्रिया अझै पनि धेरै महँगो र झन्झटिलो बनाइदिएको छ । यस्ता समस्या निरुत्साहित गर्न जिल्लाप्रहरीले केही हदसम्म प्रयास गरेका छन् । स्थानीयस्तरमा प्रहरी कार्यालयहरू शक्तिशाली बनाउन जरुरी छ ।
जनतासँग प्रहरीनजिक हुन जरुरी छ । समय–समयमा स्थानीयको सुझावअनुसार प्रहरी संगठनको कार्यशैली र आचरण परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । प्रहरीले अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाएर पञ्चायती गरेर मुद्दा छिनोफानो गर्ने प्रणालीलाई हटाउनुपर्छ । जसले गर्दा घटना अनुसन्धानमा समय दिन सकेको पाइँदैन । यसतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।
प्रस्तुति : भरत जर्घामगर
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १०:३७
प्रहरीले नियत सुधार्न आवश्यक : आईजीपी
सदरमुकाम सिरहामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नवनिर्मित भवन सोमबार उद्घाटन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, जनताप्रतिको निष्पक्ष सेवाभाव र सेवाग्राहीप्रतिको सभ्य व्यवहारलाई मूल मन्त्र मानेर काम गर्नुपर्ने निर्देशन दिए ।
प्रदेश नं. २ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विजयलाल कायस्थले पहिले प्रहरी निकाय थ्री पी अर्थात् पब्लिक (जनता), पुलिस (प्रहरी) तथा पार्टिसिपेसन (सहभागिता) को अवधारणामा चलेको भए पनि अहिले थप थ्री पी अर्थात् पोलिटिसिएशन (राजनीतिकर्मी), प्रेस (सञ्चारकर्मी) र प्रोसिक्युटर (कानुन व्यवसायी)थपिएको बताए ।
‘यी कुनै पनि अंगबिना प्रहरी निकायको काम अगाडि बढ्नसक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रत्येक प्रहरी एकाइका अगुवाहरूले यी छ वटै सरोकारवाला निकायलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्छ ।’
सिरहाका प्रहरी प्रमुखएसपी शेखर कोइरालाले डीएफआईडीको सहयोगमा ९ करोड ६० लाख १७ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ ७७ पैसा लागतमा निर्मित उक्त भवन उपत्यका बाहिर रहेकाहरूमध्ये सबैभन्दा भव्य र आधुनिक भवन रहेको बताए । ८ रेक्टर क्षमताको भूकम्पको धक्कालाई प्रतिरोध गर्न सक्ने गरी निर्माण भएको भवनमा शारीरिक रूपमा अशक्त तथा मानव अधिकारमैत्री, पुरुष तथा महिला हिरासत कक्ष, बालबालिकालाई राख्नुपरेको अवस्थामा विशेष कक्षको व्यवस्थाको साथै कार्यालयको प्रशासनिक भवन, आवास भवन र छुट्टाछुट्टै भान्सा घर छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १०:३३
जलेर २ बालिकाको मृत्यु
वर्दिवास महोत्सव सुरु